SocialTV = Vidiyo + mmekọrịta + mmekọrịta | Martech Zone
Teknụzụ vidiyo na-agbago… site na ngosipụta retina, na nnukwu nge ihu, na 3D, AppleTV, Google TV… ndị mmadụ na-ekerịta ma na-eri oke vidiyo nke vidiyo karịa na akụkọ ntolite. Tụkwasị na mgbagwoju anya bụ ihuenyo nke abụọ - iji tebụl ma ọ bụ ekwentị mkparịta ụka mgbe ị na-ekiri telivishọn. Nke a bụ ọbịbịa nke SocialTV.
Ọ bụ ezie na ikiri telivishọn ọdịnala na-ebelata, SocialTV na-egosi ọtụtụ nkwa. SocialTV na-abawanye ikiri, na-enyere nkwado na ọbụnadị ịre ahịa ọrịre. Ihe omume nwere enweghi ngwụcha na SocialTV na ngwa ndị ahụ na-aga n'ihu ịmalite na nnukwu ije. Televisionlọ ọrụ televishọn ọdịnala agaghị anọdụ ala mgbe ego na-abanye na ntanetị, SocialTV na-enye ohere iji debe ego ma too.
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na teknụzụ ha na oghere SocialTV:
ụgbọelu - Nweta mpaghara ọwa ikuku n'ikuku - netwọọdụ mgbasa ozi niile dị mkpa yana ọwa 20 ndị ọzọ - na ogo HD.
Onye ọkpọ - na-ebuputa ndị enyi gị na vidiyo na Facebook na Twitter na-egosi na TV gị na-enye gị ohere ịkekọrịta ha na ha site na pịa nke ime.
Azụ - Azụ azụ na-ejide okwu ọ bụla ekwuru na telivishọn, ka ọ na-eme. Ha na-ahazi data na oge ma anyị na-eji ya dị ka ihe nyocha ọhụụ maka TV na-eji mbadamba (nke dị ugbu a ngwa iPad).
Igwe onyonyo - na - ejikọ netwọkụ mmekọrịta na - eduga, atụmatụ mmekọrịta mmekọrịta pụrụ iche, yana ọdịnaya ahaziri iche nke ndị ọrụ ka ha na ndị ọzọ na - akparịta ụka mgbe ị na - ekiri ihe ngosi kachasị amasị gị.
GetGlue - dịka Foursquare na-enye gị ohere ịlele ebe, GetGlue na-enye gị ohere iwulite netwọkụ mmekọrịta ma lelee ihe ngosi telivishọn, ihe nkiri, na egwu.
Google TV - Chọpụta nnukwu ihe iji lelee ma ọ dị na TV dị ndụ ma ọ bụ na weebụ, iji nweta ngwangwa ma nweta ahaziri iche n'ofe ọtụtụ isi mmalite ọdịnaya.
Dijitalụ Kit - na - agbanwe mgbanwe nke mgbasa ozi ọdịnala na igwe mgbasa ozi mgbasa ozi multiscreen, na - ebi ndụ ma ọ bụ na - achọ ihe ngwọta vidiyo.
Miso - Iwuli ihe nlere nke ihe nlere nke abuo na ihe omuma ohuru.
Rovi - na-enye ikike ịchịkwa usoro ọdịnaya site na okike ruo na nkesa-ma na-anapụta mgbasa ozi dijitalụ gị ozugbo na ndị na-azụ ahịa mgbe ha chọrọ ya, gafee ọtụtụ nyiwe na ngwaọrụ.
SnappyTV - ihe dị mfe iji, ikpo okwu dị ike nke na-eme ka iyi na ndụ TV na-agbasa mmekọrịta, mkpanaka na nje.
TVcheck - ugbu a na UK, TVcheck bụ ụzọ efu, ihe ọchị na ụzọ dị mfe iji kesaa TV maka ịhụnanya gị, merie ihe nrite ma soro ndị enyi zukọta - n’emebighị nlele gị.
WiOffer - Nweta telivishọn na WiO na-enye redio na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Xbox LIVE - A gbanwere TV gị ka ọ bụrụ ahụmịhe jikọtara na Xbox LIVE. Gwuo Kinect na egwuregwu njikwa ya na ndị enyi ịntanetị ebe ọ bụla ha nọ ma ọ bụ na-ekiri ihe nkiri HD, ihe ngosi TV na egwuregwu.
YapTV - kekọrịta ikiri telivishọn gị na Twitter na Facebook.
Gị onwe gị kwa - Youtoo bụ netwọkụ mmekọrịta na netwọkụ telivishọn nwere teknụzụ dị elu nke na-eme ka ha rụọ ọrụ ọnụ.
Otu teknụzụ na-atọ ụtọ maka ntanetị nke abụọ a na-anwale ugbu a bụ akara mkpisi aka ọdịyo. Mgbe ị na-ekiri telivishọn na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba, ngwa ahụ na-agba ọsọ na mkpisiaka aka ihe ngosi telivishọn, ihe nkiri ma ọ bụ egwu azụmahịa na -emepụta site na ahụmịhe mmekọrịta na ihuenyo gị nke na-akpaghị aka.
Tags: ọkpọazụ azụmkpachịnwetangwa dijitalụVidio Ahịamisosnappytvelekọta mmadụ telivishọnelekọta mmadụtelivishọnxbox ndụgị onwe gị kwa